माओवादीबाट मुख्यमन्त्रीका दाबेदार को-को ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more माओवादीबाट मुख्यमन्त्रीका दाबेदार को-को ?
माओवादीबाट मुख्यमन्त्रीका दाबेदार को-को ?
माघ ८ गते, २०७४ - ०९:४६
काठमाडाै । नेकपा एमालेसंग ६०/४० काे हिसावकिताव गरिरहेकाे नेकपा माअाेवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्ने दुइ वटा प्रदेश छन् । २ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेको माओवादीले मुख्यमन्त्री चयनको प्रक्रिया टुंगो लगाएको छैन ।
सम्भवतः माथिबाटै मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार तोकिने र तल औपचारिकतामात्र पूरा हुने माओवादीका प्रभावशाली नेताले बताएका छन् ।माओवादी केन्द्रले प्रदेश नम्बर ६ र ७ मा मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेकाे स्राेतकाे दावी छ ।
प्रदेश नम्बर ६ बाट मुख्यमन्त्रीमा महेन्द्रवहादुर शाहीलगभग पक्का हुने एक नेताले बताए । माअाेवादी बाटै नरेश भण्डारीको पनि दावी छ । सिनियारिटीकाे अाधारमा हेर्दा महेन्द्र बहादुर शाहीकै पाेल्टामा मुख्यमन्त्रीकाे कुर्सी पर्ने देखिएकाे छ । एमालेका प्रदेश नेताहरले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेपनि माअाेवादीकाे भागमा पर्ने भएकाले दावी नगर्न एमाले नेतृत्वले प्रदेश नेताहरूलाइ सुझाएका छन् ।
उता मधेसवादी गठबन्धनको बहुमत रहेको प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्रीका लागि संघीय समाजवादी फोरमबाट मात्रै तीनजना दाबेदार देखिएका छन् । लालबाबु राउत, शैलेन्द्र साह र बिजय शाहमध्ये एक मुख्यमन्त्री बन्ने बताइएको छ ।
यद्यपि सो प्रदेशमा राजपाको पनि दाबी छ । राजपाबाट जितेन्द्र सोनाल र मनिष सुमन मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन् । तर, प्रदेशसभामा फोरम ठूलो पार्टी भएका कारण राजपाको दाबी कमजोर देखिएको छ । अन्य प्रदेशमा भने वाम गठमन्धनकै मुख्यमन्त्री हुनेछन् । तर काँग्रेस भने मुख्यमन्त्रीबाट वन्चित हुने देखिएकाे छ ।
माघ ८ गते, २०७४ - ०९:४६ मा प्रकाशित